Indro ny vahoaka: 'tompon'ny taekwondo' izao i Trump
Home » Lahatsoratra farany farany » People » Indro ny vahoaka: 'tompon'ny taekwondo' izao i Trump
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • Vaovao farany momba ny Korea Atsimo • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Nilaza i Trump fa hanao akanjo taekwondo any amin'ny Kongresy amerikana izy raha hiverina any amin'ny Trano Fotsy amin'ny ho avy.
Lee Dong-seop, filohan'ny Kukkiwon monina ao Seoul, fantatra ihany koa amin'ny hoe Foiben'ny Taekwondo Maneran-tany, dia nanome fehikibo mainty ho an'ny Taekwondo ho an'i Donald Trump, noho ny “fahalianan'i Trump amin'ny haiady”.
Nomena ny fehikibo sy ny taratasy fanamarinana Trump tamin'ny Zoma tao amin'ny Trump's Mar-a-Lago trano fonenana any Florida.
Ny fehikibo mainty dia manamarika ny filoha amerikana teo aloha ho 'Dan fahasivy', ny ambaratonga ambony indrindra azo tratrarina amin'ny haiady.
“Faly sy voninahitra ho ahy ny mahazo izany mari-pankasitrahana izany. Ny Taekwondo dia haiady lehibe ho fiarovana ny tena amin'izao fotoana izao, ” Trump hoy izy.
Nilaza ny filoha amerikana teo aloha fa hanao akanjo taekwondo any amin'ny Kongresy amerikana izy raha hiverina any amin'ny Trano Fotsy amin'ny ho avy. Nanasa ny ekipa Kukkiwon ihany koa i Trump hanao fihetsiketsehana taekwondo any Etazonia.
Toa nangataka ny “fanohanana mitohy” an'i Trump sy ny fiaraha-miasa amin'i Kukkiwon sy ny haiady i Lee.
Araka ny tranokalan'ny Kukkiwon, ny fisondrotana amin'ny ambaratonga ambony indrindra dia mitaky ny mpilatsaka hofidiana hamita fiofanana sivy taona farafahakeliny ary handefa tesis 10 pejy farafahakeliny momba ny "Fiainana Taekwondo" na "Fanahy Taekwondo."
Ny fanekena dia midika hoe Trump Mitovy laharana amin'ny maherifony ankehitriny – ilay Rosiana autocrat Vladimir Putin, izay nahazo fehikibo mainty hajaina ary nahazo mari-pahaizana ambony amin'ny taekwondo nandritra ny fitsidihana ofisialy tany Korea Atsimo tamin'ny 2013.